Sidee Ruut & Bocos u yeesheen sheeko jacayl oo gaar ah? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Haddii aad magacaabi lahayd sheekooyin jacayl oo waaweyn, waxaad soo jeedin kartaa in u dhexeeya nebi Maxamed iyo Khadiija, ama nebiga iyo xaaskiisa uu ugu jecel yahay Caa’isha, ama tii Cali iyo Faadumo.
Filimada iyo suugaanta waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto: Romeo & Juliet, Beauty & the Beast, Ali iyo Jasmine ee filimka Aladdin, ama laga yaabee Cinderella & Prince Charming.
Iyaga dhexdooda, taariikhda, dhaqanka pop -ka iyo sheekooyinka jaceylka ayaa isugu yimaada iyagoo bixinaya sheekooyin jacayl oo xamaasad leh oo soo jiita quluubtayada, shucuurta iyo mala -awaalka.
Waxaa la yaab leh, jacaylkii dhex maray Ruth & Boaz wuxuu noqday mid aad u sii waara oo ka sharaf badan mid kasta oo ka mid ah arrimahan jacaylka, runtiina, wali wuxuu saameeyaa nolosha dhammaan balaayiin annaga ah oo maanta nool – in ka badan saddex kun oo sano ka dib markii ay is jeclaadeen .
Suuradaha Al-Maacuun, Ad-Duhaa, Ash-Sharh & Al-Mumtahanah oo lagu tusay Ruut & Bocos
Suuradaha Al-Maacuun, Ad-Duhaa, Ash-Sharh & Al-Mumtahanah oo lagu tusay Ruth & Boaz, Boaz, naxariistiisa yar ee Ruud, wuxuu ahaa nin si buuxda uga soo horjeeda ninka sharka ah ee looga digay suuradda al-Maacuun (Surah 107-The Kindness Small)
Kaas xooga Agoonta (xageeda)Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.
Surah al-Ma’un 107:7
Ruut waa tusaalaha ugu fiican ee waaya-aragnimada lagu tilmaamay Surah Ad-Duhaa (Surah 93-Waqtiyadasubaxii)
Miyuunase ku helin Adigoo baadi ah oosan ku hanuuninin.Miyuunase ku helin Adigoo caydhi ah oosna ku hodminin (kuu waxyoonin).Ee Agoonta ha xoogin (hana dhihin).Ka wax su’aalina ha canaanan.Nicmada Eebahaana ka sheekee (ku mahadi).
Suuradda Ad-Duhaa 93: 7-11
Waaya-aragnimada Nimco, soddohdii sheekada Ruud waa sawir cad oo ku saabsan mabaadii’da lagu sheegay Suuradda Ash-Sharh (Surah 94-gargaar
Miyannaan kuu waasicinin Laabta (ku nuurinin).Oonaan ka dajinin culayskii.dhabarka kaa cusleeyay. Miyaannaan kor yeelin magacaaga (xusiddaada). Cidhiidhina waxaa ku dhaw fudayd (faraj). Cidhiidhina waxaa ku dhaw fudayd.
Suuradda Ash-Sharh 94: 1-6
Ruut & Bocos ee maanta
Jaceylkooda sidoo kale waa sawir jaceyl qarsoodi ah iyo mid ruuxi ah oo Alle noo soo bandhigay aniga iyo adiga. Sheekada Ruth iyo Boaz waxay ka hadlaysaa jacaylka dhaqamada kala duwan & jaceylka la mamnuucay, socdaalka iyo xiriirka ka dhexeeya nin awood leh iyo haween nugul-lagu dabaqi karo.Waxay ka hadlaysaa cilaaqaadkii hore ee Yuhuudda iyo Carabta. Waxay noo noqonaysaa qorshe ku saabsan sidii loo dhisi lahaa guur caafimaad qaba. .Mid kasta oo ka mid ah cabbiraadahaas sheekada jacaylka ee Ruth & Boaz waxay mudan tahay in la ogaado.
Jacaylkoodu wuxuu ku qoran yahay Kitaabka Ruud ee Kitaabka/Kitaabka. Waa buugaaban gaagaaban oo keliya 2400 eray – oo aad u mudan in laga akhriyo (halkan). Waxaa la dejiyay qiyaastii 1150 BCE, taas oo ka dhigaysa tan ugu da’da weyn dhammaan sheekooyinka jacaylka ee la duubay. Waxaa laga sameeyay dhowr filim.
Filim Hollywood ah oo muujinaya sheekada jacay ee Ruud
Sheekada Jacayl ee Ruud,
Nimco iyo seygeeda, oo labadooduba Yuhuud ahaa, iyaga iyo labadooda wiilba waxay ka tageen Israa’iil si ay abaarta uga baxsadaan oo ay u degaan dalka Moo’aab ee u dhow (maanta Urdun). Kadib markii ay guursadeen dumarka deegaanka labada wiilba way dhintaan, sida Nimco ninkeedii, iyada oo kaligeed ka tagtay labadeedii gabdhood ee ay soddohda u ahayd.
Nimco waxay go’aansatay inay ku laabato dalkeedii Israa’iil oo mid ka mid ah gabdhihii ay soddohda u ahayd, ayaa doortay inay raacdo. Maqnaansho dheer ka dib, Nimco waxay ku soo laabatay dalkeedii Beytlaxam iyada oo ah carmal faqri ah oo ay weheliso Ruth, oo ah soo -galooti reer Moo’aab (Carab) ah oo nugul.
Ruut & Bocos oo kulmay
Iyada oo aan wax dakhli ah helin, Ruth waxay u baxdaa inay soo aruuriso hadhuudh ay ka tageen shaqaalihii beer gooska . Shareecada Nabi Muuse oo ah shabakad badbaado bulsheed, ayaa ku amray dadka goostay inay beeraha qaar uga tagaan si saboolku cunto u soo urursado. Si lama filaan ah waxay u ekaan doontaa, Ruth waxay aragtaa iyada oo guranaysa miraha beeraha nin hantiile ah oo la odhan jiray Boaz.
Boaz wuxuu arkay Ruth oo ka mid ah kuwa kale oo aad ugu dadaalaya inay soo uruuriyaan hadhuudhkii hadhaygadaashiisa shaqaalihiisii ​​shaqo. Wuxuu farayaa horjoogayaashiisa inay hadhuudh dheeraad ah ku daayaan berrinka si ay wax badan u soo ururiso. Markay sidaas samaynayso, Boaz wuxuu ku siinayaa sawir ka soo horjeeda ninka sharka ah ee ku jira Suuradda al-Ma’uun iyo Ruut oo dabooshay baahideedii sida ay tilmaamayso Suuradda ad-Duhaa
Farshaxan badan ayaa la sameeyay oo muujinaya kulankooda
Sababtoo ah waxay aad ugu soo ururin kartaa beerihiisa, Ruth waxay maalin kasta ku soo noqotaa beerihii Bocas si ay u soo ururiso hadhuudh hadhay.
Boaz, weligiis ilaaliyuhu, wuxuu hubiyaa in Ruth aan la dhibaateynin ama aan lagu xadgudbin mid ka mid ah shaqaalihiisa. Ruth iyo Boaz waa ay danaynayaan midba midka kale, laakiin kala duwanaanshaha da’da, xaaladda bulsheed, iyo dhalashada midna ma dhaqaaqdo. Halkan Nimco waxay u dhaqaaqdaa sidii ciyaar-sameeye. Waxay ku amartay Ruth inay si geesinimo leh u jiifsato dhinaceeda Boaz habeenkii kadib markuu u dabaaldegay ururinta goosashada. Boaz wuxuu taas u fahmay inay tahay soo jeedin guur wuxuuna go’aansaday inuu guursado.
Bixiye Ninkii xigay –Kinsman
Laakiin xaaladdu way ka dhib badan tahay jacaylka dhexdooda ah. Nimco waa qaraabo Bocas, oo mar haddii Ruut ay soddoh u tahay, Boaz iyo Ruut waa qaraabo/qaraabo guur. Boaz waa inuu guursadaan qaraabo ah. Tani waxay ka dhigan tahay in Sharciga Muuse uu ku guursan doono ‘magaca’ ninkeedii kowaad (wiilkii Nimco) sidaasna uu ku masruufo. Tani waxay ka dhigan tahay in Bocas uu iibsado beerihii Naomi. In kasta oo taasi qiimo badan ugu yeelan doonto Boaz haddana ma ahayn caqabadda ugu weyn. Waxaa jiray qaraabo kale oo dhow oo lahaa xuquuqda ugu horreysa si ay u iibsadaan beeraha reer Naomi (oo weliba sidaas ku guursado Ruud).
Haddaba guurkii Ruud iyo Bocas wuxuu ku xirnaa haddii nin kale doonayo mas’uuliyadda daryeelka Naomi iyo Ruud. Kulan dadweyne oo ay isugu yimaadeen odayaasha magaalada ayaa kan ugu horreeya wuxuu diiday guurka tan iyo markii uu khatar geliyay hantidiisa. Boaz wuxuu markaa xor u ahaa inuu iibsado oo soo furto hantida reer Naomi oo uu guursado Ruud. Nimco, sanado badan oo dhib badan ka dib waxay hadda heleysaa gargaar, iyadoo ku muujineysa mabda’a Suuradda Ash-Sharh.
Dhaxalka Ruut & Bocos
Midowgoodii waxay ku dhaleen ilmo, Obed, oo isna noqday awowgii Boqor Dawud/David. waxaa loo ballanqaaday in ‘Masiixa’ uu ka imaan doono qoyskiisa. Waxsii sheegyada dheeraadka ah waxay sii saadaaliyeen dhalashada bikradda ugu dambayntii Ciise Masiix wuxuu ku dhashay Beytlaxam, isla magaaladaas oo Ruud iyo Bocas ay muddo dheer ka hor kulmeen.
Jaceylkooda, guurkooda iyo xariirkooda qoysku waxay keeneen in maanta ay saldhig u tahay jadwalka casriga ah, iyo fasaxyada caalamiga ah sida Kirismaska ​​& Easter – uma xuma jaceylka tuulo boodh badan 3000 oo sano ka hor.
Laakiin sheekada jacaylka Ruut & Bocos sidoo kale waa sawir jacayl ka sii weyn
mida adiga iyo aniga laygu martiqaaday.
Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo qeexayaa sidii Ruth oo kale markii uu leeyahay:
Hoosheeca 2: ​​23
Nebi Axdiga Hore Hosea (ca 750 BC) ayaa dib -u -heshiisiinta guurkiisii ​​burburay u adeegsaday si uu u sawiro ilaah oo jacaylkiisa nagu soo gaadhaya. Sida Ruut oo dhulka u soo gashay sidii qof aan la jeclayn, laakiin markaas Boaz uu tusay jacayl, Wuxuu damcay inuu muujiyo jacaylkiisa xataa kuwa innaga oo dareensan ka fog jacaylkiisa.
Tan waxaa lagu soo xigtay Injiilka (Rooma 9:25) si loo muujiyo sida Eebbe u ballaadhiyo inuu jeclaado far ka yimid. Sidee jacaylkiisa loo muujiyaa? Ciise Masiix, farcankii ka soo farcamay Boaz & Ruut, sida nin waa ‘qaraabadeena’, sida Boaz uu Ruut u ahaa, Wuxuu bixiyay deyntii dembiga eena markii iskutallaabta lagu qodbay, oo sidaas ayuu yiri
Sida Boaz u ahaa ‘xigtadiis-furay’ oo bixiyay qiimo uu Rut ku soo furto, Ciise waa ‘qaraabadeena’ oo bixiyay (noloshiisa) si uu inoo furto.
Tusaale u ah guurarakeena
Qaabkii uu Isa al Masih (iyo Boaz) u bixiyay si uu u furto dabadeedna ugu guuleysto tusaalayaasha arooskiisa sida aan u dhisi karno guurkeena. Kitaabka Quduuska ah wuxuu sharxayaa sida aan u aasaasno guurkeena:
Efesos 5: 21-33
Maadaama Boaz iyo Ruth ay guurkooda ku abuureen jaceyl iyo ixtiraam, daryeelkii Isa -na wuxuu tusaale u yahay nimanku inay xaasaskooda u huraan allabari ahaan, sidaa darteed waxaa wanaagsan inaan guurkeena ku dhisno isla qiimayaashaas.
Martiqaad Aroos aniga iyo adiga Sida dhammaan sheekooyinka jacaylka wanaagsan, Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku xiraa aroos. Sida qiimaha uu Bocas u bixiyey si uu u furto Ruth uu u gogol xaadhay arooskooda, qiimihii Ciise al Masih PBUH bixiyay ayaa u gogol xaadhay arooskeenna. Arooskaasi ma aha mid maldahan ah ee waa mid dhab ah, kuwa aqbalaya casuumadda arooskiisa waxaa loogu yeeraa ‘Aroosadda Masiixa’. Sida ay leedahay:
Kuwa qaata bixinta Ciise ee furashada waxay noqdaan ‘aroosadiisa’Arooskan jannada ah ayaa dhammaanteen naloo soo bandhigay. Baybalku wuxuu ku dhammaaday martiqaadkan aniga iyo adiga si aan u nimaadno arooskiisa
Muujintii 22: 17
Xidhiidhka ka dhexeeya Rut & Bocas waa tusaalaha jacaylka oo ilaa maanta is dareensiinaya